17 Kubadda cagta ee Nederland - Ku soo dhowow Nederland
Dadka reer Nederland aad bay uga helaan ciyaaraha. Ciyaaraha aad loogu jecel yahay waxaa kamid ah: kubadda cagta, hockey, baaskiilka, dabaasha, doonyaha iyo fardo-fuulka. Gaar ahaan kubadda ayaa aad loogu jecel yahay. Haddii telefishinka laga sii daynayo ciyaar kubad cagta ah, baabuurtu aad bay jidadka ugu yar tahay. Haddii kooxda Nederland debedda ciyaar u tagto, taageerayaal badan ayaa raaca, kuwaasoo aad ku garanayso cimaamadaha midabaka orange ah oo ay wataan. Kooxaha Nederland ugu caansani waa: Ajax, Feijenoord iyo PSV. Inkastoo Nederland kubadda cagtaa aad looga jecel yahay, haddana hal mar bay Nederland koobka Yurub qaadeen, markaasoo ahayd 1988-dii. Koobkan waxaa lagu ciyaaray waddanka Jarmalka Galbeed. Nederland 2 iyo 0 ayay Ruushka kaga badisay.
Qaar kamid ah ciyaaryahanada caanka ah ee reer Nederland:
Johan Cruijff: Ciyaar yahan ayuu markii hore ahaa, markii dambena tababare. Haddana wuxuu tababare u yahay kooxda Catalooniya ee Barcelona. FC Barcelona wuxuu ka dhigay koox ay dadka kubadda cagta jeceli ka ugu yeedheen 'dream team' ama 'kooxdii qof kasta jeclaa inuu helo'. Kooxdani waxay heerkeedii ugu sarreeyey gaadhay markii ay ku guulaysatay Koobkii Yurub 1992-dii.
Marco van Baston: Shan gool buu kooxda Nederland u dhaliyey markii ay ku guulaysanayeen Koobkii Yurub. Goolashii uu dhaliyey koobkaas ciyaartiisii ugu dambeeyey ayaa lagu tiriyaa goolashii ugu wanaagsanaa ee taariikhda la dhaliyo. Saddex jeer ayaana loo doortay Ciyaaryahanka Yurubiyaanka ee Sannadka.
Ruud Gullit: Waxaa kaloo ninkan lagu naanaysaa Zwarte Tulp. Wuxuu ahaa kabtankii kooxda Nederland markay ciyaarayeen Koobka Yurub 1988-dii. Billado badan ayaa la siiyey. Laba jeer ayaa isna loo doortay Ciyaaryahanka Sannadka ee Dunnida. 1996-dii ayuu ciyaartii iska daayey, oo tababare noqday. Kooxda AC Milan ayaa saddexda nin ee reer Nederland ee kala ah, isaga, Frankrijkaard iyo Marco van Basten looga bixiyey 'saddexdii nin ee qiimaha dahabiga ah lahaa.'
Patrick Kluivert: Wuxuu guulaha ugu waaweyn soo hooyey markuu u ciyaarayey kooxaha kala ah Ajax iyo FC Barcelona. Ajax ayuu weliba billadaha ugu badan ka qaatay. Markuu Barcelona u ciyaarayeyna lix xilli oo la ciyaaray dhexdood ayuu 122 gool dhaliyey. Wuxuu noqday berigaa ninkii ugu goolasha badnaa ee koox reer Spain ah u ciyaara ilaa iyo sannadihii kontomeeyadii. 79 jeer ayuu kooxda waddankan Nederland u ciyaaray. 40 gool ayuuna wakhtigaa dhaliyey tanoo ka dhigaysa ninki ugu goolasha badnaa ee kooxdaa soo mara.
Nimanka kale ee reer Nederland ee kubadda caanka ku ah waxay kala yihiin: Ruud van Nistelrooy, Ronald de Boer, Ronald Koeman iyo Edwin van der Sar (goolhaye).